ukuhlaselwa Cyber ​​hit Twitter and New York Times - Izindaba Rule
ukuhlaselwa Cyber ​​hit Twitter and New York Times
Twitter and The New York Times beshaywa nge ukuhlaselwa Cyber ​​ngoLwesibili, nge credit ngokushesha imangalelwe Esekelwa iqembu womholi strongman waseSiriya Bashar Al-Assad.
LaseSiriya Electronic Army, Okuxakayo, babesebenzisa Twitter alwela imizamo yayo ukuthatha phansi ethandwa emhlabeni jikelele eyodwa-to-abaningi service imiyalezo kanye Times izindaba website.
“Media uya phansi,” umlayezo ku-akhawunti SEA Twitter abamemeza kubo. “Twitter, usukulungele?”
Ukuhlasela Cyber ​​ngokusobala okuhloswe ngaso Domain Name System ukuthi ukuthi uba lwemibhalo izinhlobo for ewachitha traffic inthanethi kwi-website amakheli.
Kubaduni kungaba ukuduna web traffic ngokushintsha ukuma ulwazi ikheli DNS ukuthumela kubavakashi kumawebhusayithi olikhethayo zabo.
An Australian service yokubhalisa domain wabonakala Kuye hit in the kuhlasela.
“DNS Wethu umhlinzeki nenkinga lapho kubonakala amarekhodi DNS yezinhlangano ezahlukene modified, kuhlanganise omunye zizinda Twitter sika asetshenziselwa image bakhonze, twimg.com,” Twitter kusho uthumele isimo salo blog.
“Viewing of izithombe nezithombe kwaba babeyivakashela ngankathi nomthelela,” Umlayezo inkampani San Francisco-based wachaza.
Inkinga yaxazululwa engakapheli amahora amabili, ngokusho Twitter.
I-New York Times yathi website yayo wehlela ngoLwesibili ngenxa a “ezinonya attack zangaphandle.”
Ngokusho kokhulumela Times Eileen Murphy futhi wenze lesi simemezelo on Twitter, amasonto amabili ngemuva site waya okungaxhunyiwe ku-intanethi ngenxa lokho nsuku zonke uthe nenkinga langaphakathi.
Tweet Her umnyuziki wathi: “re: http://nytimes.com – kuhlola kokuthoma – udaba kungenzeka kubangelwa ezinonya ukuhlasela yangaphandle. ukusebenza ukuze silungise.”
main akhawunti Iphephandaba iThe Twitter wathi ngemva nje kokubuthwa, 2000 GMT ukuthi website “uhlangabezana nobunzima bokusebenza” kodwa lezi zindaba kwakusalandelwa khona ishicilelwe nge Twitter kanye nezinye links.
Math Johansen of WhiteHat Security wathi Tweet ukuthi izici lobuchwepheshe website ngesikhathi Outage babeyizinkulungwane “ekhomba Electronic waseSiriya Army.”
Ulwandle usephawule umthwalo esikhathini esidlule ukuhlasela Cyber ​​kwamanye izindaba Izitolo ezinkulu.
I website Washington Post utholakale eshaywe waze kule nyanga ngesikhathi kuhlaselwa kusolwa olwandle.
The Times wathi ngoJanuwari ukuthi izigebengu weba amaphasiwedi ayo ezinkampani kanye afinyelelwe computer of 53 abasebenzi emva iphephandaba eshicilelwe umbiko fortune emndenini kaNdunankulu China sika Wen Jiabao.
19336	0 Bashar Al-Assad, China, Domain Name System, New York Times, Electronic Syrian Army, Twitter, Washington Post, WhiteHat Security
← Indlela Cocaine Kungenzeka Rewire the Brain Ngemva Just One Sebenzisa Skype emamaki 10 iminyaka esabe emhlabeni →